ny tahan’io eto Madagasikara, ny diabeta, ny fiakaran’ny tosi-drà ambony na ny “hypertension artérielle” izay ny 40% amin’ny Malagasy no tratran’io, ary ny fahaefatra dia ny aretin’ny taovaom-pisefoana mitarazoka, hoy ny Dr Rakotoarison Vincent lehiben'ny sampandraharaha misahana ny aretina tsy mifindra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ireo no aretina lehibe izay toa tsinontsinoavintsika, kanefa tena mahafaty. Miteraka olana eo amin’ny fiarahamonina, ary mitombo izany amin’izao fisian’ny coronavirus izao. Mihoatra ny 100 ny voa izay miteraka tebiteby sy ahiahy amin'ny olona. Lasa miteraka rarin-tsaina na Stress eo amin'ny Malagasy izany. Samy tratran'izy io, na ireo mararin'ny coronavirus na ny olona any anaty fiarahamonina. Lasa mandringa ny fahasalamana satria mikorontana ny saina, lasa kizitina sy mototra na miavona, tsy mazoto homana.Ireo no famantarana fa tratry ny rarin-tsaina ny olona iray, hoy ny fanazavan'ity mpitsabo ity. Azo atao tsara ny manantona toeram-pitsaboana ahitana ireo manampahaizana momba ny fikorontanana ara-tsaina.Tsara ihany koa ny miezaka mandamin-tsaina sy tsy mora taitaitra amin'izay zavatra re sy hita satria lasa mampandringa ny fahasalamana. Misy karazany maro ireo rantsam-pitsaboana, ka ny neo-phsychiatrie dia manana manampahaizana 7 i Madagasikara, manana 10 ho an’ny psychiatrie, 33 ireo dokotera manam-pahaizana manokana momba ny fahasalaman’ny saina, ergo thérapeute 8 ary psychologue miisa 18.